Volley-ball Tompondakan’i Afrika Manana roa andro hanarenana ny fahavoazany ny Gnvb Malagasy
Nanomboka tamin’ny alatsinainy 01 aprily teo ka tsy hifarana raha tsy ny 11 aprily izao ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny ekipa tompondaka andiany faha-38 eo amin’ny taranja volley-ball sokajy lehilahy tontosaina any Le Caire any Egypte.
Ao amin’ny vondrona B ahitana an’i Smouha (EGY), Gisagare (RWA), Christian (UGA) ary El Etihad (LBA) no misy ny Zandarimaria (MAD). Nisongadina teo amin’ny andro voalohany ny faharesen’ny ekipa Fap de Yaoundé avy any Cameroun seta 3-0 nanoloana ny Vc Espoir avy any Congo Demokratika ary ny nandresen’ny Smouha seta 3-0 ny Gnvb Malagasy. Teo amin’ny andro faha-2 ny talata 02 aprily dia mbola lavon’ny Gisagare (RWA) indray ny Malagasy. Amin’ny zoma 5 sy sabotsy 6 aprily indray ny Gnvb vao miakatra kianja manarina ny fahavoazana. Marihana fa niala tsy handray anjara tamin’ity fifaninanana ity ny klioba Sfaxien, Espérance de Tunis ary Étoile du Sahel avy any Tunisie sy ny NR Borj Bouaririj avy any Algérie noho ny fanakianan’izy ireo ny fanomanana ny fifaninanana.